MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward MPT -KSGM JO's 7th Year Anniversary Appreciation Lucky Draw mm - MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward
MPT(မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း)နှင့် ဂျပန်ကော်ပိုရေးရှင်း (KSGM)တို့၏ လုပ်ငန်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း (၇)နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် လေးစားတန်ဖိုးထားရပါသော MPT သုံးစွဲသူများအတွက် ကျေးဇူးတုံ့ပြန် ကံစမ်းပွဲ အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။
သုံးစွဲသူအနေဖြင့်မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာနည်းလမ်းဖြင့် ၁၀၀၀ ကျပ်နှင့်အထက်ဖုန်းငွေဖြည့်ပြီး MPT4Uမှ Top-up ထိပေါက်ကစားခြင်းဖြင့် လက်ငင်းဒေတာဆုလက်ဆောင်များ(သို့) ဆုကြီးများ ကံထူးရန် ကံစမ်း ခွင့်များ ရရှိ နိုင် ပါ သည်။
MPT Club memberများအနေဖြင့် လစဉ် Lucky-5 ပရိုမိုးရှင်းရက်များတွင် Top-up ထိပေါက်ကစားခွင့်တစ်ကြိမ်ထပ်မံရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။.
သြဂုတ်လ ၁၇ရက် ၂၀၂၀ မှ အောက်တိုဘာလ ၂၅ရက် ၂၀၂၀အထိ
ယခု ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်ကြီးတွင် ပါဝင်ကံစမ်းနိုင်ရန် *4040#ကိုခေါ်ဆို၍ MPT4U Appအား Download(သို့) Updateပြုလုပ်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။
၁။ “(၇)နှစ်မြောက် ကျေးဇူးတုံ့ပြန် ကံစမ်းပွဲ” ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်က ဘာပါလဲ?
MPT ကို အစဉ်တစိုက် သုံးစွဲသူများအတွက် ဒေတာဆုကြီးများနှင့် အပတ်စဉ်ဆုများဖြင့် ကျေးဇူးတုံ့ပြန်ထားတဲ့ အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ MPT GSM/WCDMA နှင့် Base Tariff Prepaid စနစ်အသုံးပြုသူများသည် မည်သည့် Channel (USSD/ E-Topup/DMS/ SDP/MPT4U / Mobile Money) ဖြင့်မဆို ၁၀၀၀ ကျပ်နှင့်အထက် ဖုန်းဘေလ်ဖြည့်လိုက်ရုံနဲ့ MPT4U app ထဲရှိ “Top up Hti Pauk” တွင် ကံစမ်းရန် Chance များရရှိပြီး ချက်ချင်းကံထူးနိုင်သည့် ဒေတာဆုများ (သို့) အပတ်စဉ်ဆုကြီးများ ကံစမ်းရန် tickets များ ရရှိကံထူးနိုင်ပါတယ်။ ဖုန်းဘေလ် ၁၀၀၀ကျပ်ကို Chance (၁)ခု ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် MPT Club အဖွဲ့ဝင်များအတွက် Lucky5နေ့များ (လစဉ် ၅ရက်၊ ၁၅ရက် ၊ ၂၅ရက် နေ့များ)တွင် ဖုန်းငွေဖြည့်သွင်းသည့်အကြိမ်တိုင်းအတွက် အပိုဆောင်း Chance (၁) ခုထပ်မံရရှိပြီး ကံစမ်းနိုင်မှာပါ။
၂။ “(၇)နှစ်မြောက် ကျေးဇူးတုံ့ပြန် ကံစမ်းပွဲ” ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်မှာပါဝင်ဖို့ ဘာလုပ်ရမလဲ?
၁၀၀၀ ကျပ်နှင့်အထက် ဖုန်းဘေလ်ဖြည့်လိုက်ရုံပါပဲ။ ဖုန်းဘေလ် ၁၀၀၀ ကျပ်ကို Chance (၁)ခုရရှိပြီး MPT4U app ထဲရှိ “Top up Hti Pauk” တွင် Chance များဖြင့် ကံစမ်းကာ ချက်ချင်းကံထူးနိုင်သည့် ဒေတာဆုများ (သို့) အပတ်စဉ်ဆုကြီးများအတွက် tickets များ ရရှိကံထူးလိုက်ပါ။ ဖုန်းငွေများများဖြည့်ပါက Chance များများ ရရှိကံစမ်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
MPT GSM/WCDMA နှင့် Base Tariff Prepaid စနစ်အသုံးပြုသူများအားလုံးသည် ၁၀၀၀ ကျပ်နှင့်အထက် ဖုန်းဘေလ်ဖြည့်ပါက Chance များရရှိမှာပါ။
ရရှိထားသော Chance ကို MPT4U app ထဲရှိ “Top up Hti Pauk” တွင် ကံစမ်းပြီး ချက်ချင်း ကံထူးနိုင်သည့် ဒေတာဆုများ (သို့) အပတ်စဉ်ဆုကြီးများ ကံစမ်းရန် tickets များ ရရှိကံထူးနိုင်မှာပါ။ MPT4U app မရှိပါက *4040# ကိုရိုက်နှိပ်ခေါ်ဆိုပြီး အခမဲ့ဒေါင်းလုတ်ရယူလိုက်ပါ။
ဖုန်းဘေလ် ၁၀၀၀ကျပ်ကို Chance (၁)ခု နှုန်းဖြင့် စုစုပေါင်း Chance (၃) ခု ရရှိကံစမ်းနိုင်မှာပါ။ ဖုန်းငွေများများဖြည့်ပါက Chance များများ ရရှိကံစမ်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
၇။ သြဂုတ်လ (၂၅)ရက်နေ့တွင် ဖုန်းဘေလ် (၅၀၀၀)ကျပ်ဖြည့်သွင်းထားပါတယ်။ Chance (၅)ခုပဲရပြီး အပိုဆောင်း Chance (၁) ခုမရရှိပါဘူး။ ဘာလို့လဲ?
လစဉ် ၅၊ ၁၅၊ ၂၅ နေ့များ (Lucky5နေ့များ)တွင် ဖုန်းငွေဖြည့်သွင်းသည့်အကြိမ်တိုင်းအတွက် အပိုဆောင်း Chance (၁) ခု ရရှိမှာပါ။သတိပြုရမှာက ယင်းအခွင့်အရေးရရှိဖို့ MPT Club အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။ *345# ကိုရိုက်နှိပ်ခေါ်ဆိုခြင်း (သို့မဟုတ်) 345 သို့ “REG M” (သို့) “F” ဟု စာတိုပေးပို့ခြင်း (သို့မဟုတ်) MPT4U မှတစ်ဆင့် MPT Club အဖွဲ့ဝင်ပြီး အထူးသီးသန့်ခံစားခွင့်များ ရယူလိုက်ပါ။
၈။ ကံစမ်းခွင့်ကာလအတွင်း ဖုန်းဘေလ်ဖြည့်လိုက်ပါတယ်။ ဘာတွေ ကံထူးနိုင်မှာလဲ?
ဖုန်းဘေလ် ၁၀၀၀ကျပ်ကို Chance (၁)ခု နှုန်းဖြင့် MPT4U app ထဲရှိ “Top up Hti Pauk” တွင် ကစားပြီး ချက်ချင်းကံထူးနိုင်သည့် ဒေတာဆုများ (သို့) အပတ်စဉ်ဆုကြီးများ ကံစမ်းရန် tickets များ ရရှိမှာပါ။ 777 GB အထိ ဒေတာဆုလက်ဆောင်များအပြင် အပတ်စဉ်ဆုကြီးများလည်း ကံထူးနိုင်ပါတယ်။ ကံစမ်းနိုင်သည့်ဆုကြီးများကို အပတ်စဉ် တနင်္လာနေ့တိုင်း MPT ၏ တရားဝင် Facebook စာမျက်နှာ နှင့် Website တွင် ကြေညာပေးသွားမှာမို့ ရင်ခုန်စောင့်စားစွာ ကံစမ်းရယူနိုင်ပါပြီ။
၉။ အပတ်စဉ်ဆုကြီး ကံထူးခဲ့ပါက ဘယ်လိုသိရှိနိုင်မှာလဲ။
အပတ်စဉ်ဆုကံထူးရှင်များကို MPT၏ တရားဝင် Facebook Page မှတစ်ဆင့် ကြေညာပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Ticket များရရှိထားသည့်အပတ်၏ နောက် (၁) ပတ် စနေနေ့တွင်ကြေညာပေးသွားမှာပါ။ ဥပမာ – သြဂုတ် (၁၇)ရက် မှ (၂၃)ရက် အတွင်း Ticket ရရှိကံစမ်းထားမှုများအတွက် ကံထူးရှင်များကို သြဂုတ်(၂၉)ရက်တွင် ကြေညာပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ အပတ်စဉ်ဆုကြီး ကံထူးရှင်များကို MPTမှ ဆက်သွယ်အကြောင်း ကြားပေးမှာ ဖြစ်ပြီး အသေးစိတ်ကို စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များတွင် ဖော်ပြထားပါတယ်။
၁၀။ ဖုန်းဘေလ် (၁၀၀၀) ကို USSD Channel မှတစ်ဆင့် ဖြည့်ထားပါတယ်။ နောက်ထပ် ဖုန်းဘေလ် (၃၀၀၀) ကို MPT4U မှ ထပ်ဖြည့်ပါတယ်။ ရရှိသော Chance များမှာ ပေါင်းစည်းသွားမှာပါလား။
၁၁။ ရရှိထားသော Chance များ၏ အရေအတွက်ကို ဘယ်လို စစ်ဆေးနိုင်ပါမလဲ။
ရရှိထားသော Chance များ၏ အရေအတွက်ကို *224# ကို ရိုက်နှိပ်ခေါ်ဆို၍ စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။
၁၂။ တစ်နေ့လျှင် မည်သည့်အကြိမ်ခန့် ဖုန်းဘေလ်ဖြည့်နိုင်ပါသလဲ။
၁၃။ ဖုန်းတစ်လုံးမှ အခြားဖုန်းတစ်လုံးသို့ ဖုန်းငွေဖြည့်ပေးခြင်းသည် ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်တွင် ပါဝင်နိုင်ပါသလား။
၁၄။ ငွေလွှဲပြောင်း၍ ဖြည့်သွင်းခြင်း (Balance Transfer) ဖြင့် ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်တွင် ပါဝင်နိုင်ပါသလား။
၁၅။ ကံစမ်းမဲကာလက ဘယ်အထိလဲ?
ကံစမ်းမဲကာလမှာ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၁၇ ရက်နေ့ (မနက် ၇ နာရီ) မှ အောက်တိုဘာလ ၂၅ ရက်နေ့အထိ ဖြစ်ပါတယ်။